25 Giugno 2020 sono 39 anni delle apparizioni di Medjugorje. Cosa successe nei primi sette giorni? | PREGHIERA&NEWS
June 25, 2020 bụ afọ 39 nke ngwa Medjugorje. Nso iketịbe ke akpa usen itiaba?
Tupu June 24, 1981 Medjugorje (nke a na Croatian putara "n'ugwu" ma ana-akpọ ya Megiugorie) bụ naanị obere ime obodo ebe ana-akpa agwa furu efu na mpaghara ọjọọ nke tọgbọrọ n'efu nke Yugoslavia. Site na ụbọchị ahụ, ihe niile agbanweela na obodo ahụ abụrụla otu n'ime ogige ndị kachasị mkpa nke usoro okpukpe a ma ama na Iso .zọ Kraịst.
Gịnị mere na June 24, 1981? N’ime oge mbu (nke mbu n’usoro ogologo ka na-aga n’ihu), Nwanyị nwanyị pụtara n’ihu otu ụmụ nwoke nọ n’obodo izi ozi nke udo na ntughari gaa na ụwa dum site n’ekpere na ibu ọnụ.
Apparition of Medjugorje: Ubochi mbu
Ọ bụ n’ehihie Wenezde ụbọchị 24 nke June 1981, bụ oriri nke St. John Baptist, mgbe ụmụaka isii nọ n’agbata afọ iri na abụọ na afọ iri na-aga ije n’elu Ugwu Crnica (nke a na-akpọ Obot Akụrụngwa) na mpaghara mkpịsị akpọrọ Podbrdo ha hụrụ na-egosi Onucha mara mma nke nwa agbọghọ mara mma ma na - enwu n’ile n’uba. Youngmụaka isii ahụ bụ Ivanka Ivanković (afọ 12), Mirjana Dragićević (20 dị afọ), Vicka Ivanković (15 dị afọ), Ivan Dragićevi years (16 afọ), 16 n'ime ndị ọhụụ isii dị ugbu a, tinyere Ivan Ivanković (afọ 16) na Milka Pavlović (4 afọ). Ha ghọtara ozugbo na ọ bụ Madonna, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na mmụọ ahụ anaghị ekwu okwu ma na-enye ha ikike ịbịakwute, mana ha na-atụ egwu wee gbalaga. N'ụlọ, ha na-akọ akụkọ ahụ mana ndị toro eto, na-atụ ụjọ na nsonaazụ ndị ọ nwere ike (yabụ echefula na Federal Socialist Republic of Yugoslavia bụ onye na-ekweghị na Chineke), gwa ha ka ha gba nkịtị.
Apparition of Medjugorje: Ubochi nke abuo
Agbanyeghị, ozi a siri ezigbo ike na ọ na-agbasa n'ime obodo ozugbo, n'echi ya, June 25, 81, otu ndị leruru anya zukọrọ n'otu ebe na n'otu oge ahụ na olile anya ọdụ ọhụrụ, nke na-abịaghị oge na-abịa. Otu n'ime ha bụ ụmụ nwoke si na abalị gara aga ma ewezuga Ivan Ivankovi will na Milka, ndị na-agaghị ahụkwa nne anyị nwanyị n'agbanyeghị itinye aka na ntinye akwụkwọ na-esote. A bụ m kama Marija Pavlović (16 dị afọ 10), nwanne nwanyị nke okenye Milka, na obere Jakov Čolo nke afọ 4 ka ya na nke ọzọ ahụ gaa "Gospa", Madonna, bụ onye na-apụta oge a na igwe ojii na-enweghị nwa, na-ama mma mgbe niile ma na-egbuke egbuke. . Ndi otu ndi huru ohuru nke nwanyi di ngozi hotara hiwere nke oma, o bu ya mere a na-eme ememme ncheta ahu n’ime June 25 n’afọ obula, dika nwanyi n’onwe ya siri kpebie.
N'oge a, ihe ịrịba ama nke Gospa, ụmụ agbọghọ isii niile na-ahụ ọhụụ na-agba ọsọ n'etiti nkume, osisi ogwu na osisi dị n'akụkụ ugwu ahụ. Agbanyeghi na emeghi akara okporo ụzọ a, ha anaghị akọ akọ ma ha ga-agwa ndị ọzọ sonyere na ha chere na “ike” dị omimi. Madonna na-egosi ọchị ọchị, yi uwe na-acha ọcha nke na-acha ọcha, na-acha ọcha kpuchie ntutu isi ya; Ọ nwere anya na-acha anụnụ anụnụ n'anya ma kpuchie ya na kpakpando iri na abụọ. Olu ya di uto "dika egwu". Soro umuaka gbanwere okwu, soro ha kpee ekpere ma kwe nkwa ilaghachi.
Apparition of Medjugorje: Ubochi ato
Na Fraịdee 26 June 1981, ihe karịrị mmadụ 1000 na-ezukọ, nke na-egbuke egbuke. Na ntinye aka nke ụfọdụ ndị okenye, Vicka tụbara karama mmiri a gọziri agọzi na ngwa ahụ iji chọpụta ma ọnụ ọgụgụ ahụ ọ̀ bụ nke eluigwe ma ọ bụ nke mmụọ ọjọọ. "Ọ bụrụ na ị bụ Nwanyị anyị, nọnyere anyị, ọ bụrụ na ịnọghị, pụọ!" o tiri mkpu ike. Nwaanyị anyị na-amụmụ ọnụ ọchị na mgbe ajuju Mirjana taara, "Gịnị bụ aha gị?", Na nke mbụ ọ na-ekwu "Abụ m nwanyị a gọziri agọzi". Na-ekwughachi okwu a "Udo" ọtụtụ oge na, mgbe ọ gụchara ọkwa ahụ, ebe ndị ọhụụ ahụ si n'ugwu ahụ pụọ, ọ pụtara ọzọ naanị Marija, oge a na-ebe ákwá na obe n'azụ ya. Okwu ya bụ ihe mbụ dị njọ: “A ga-azọpụta ụwa naanị site n'udo, mana ụwa niile ga-enwe udo naanị ma ọ bụrụ na ọ chọta Chukwu, Chineke nọ ebe ahụ, gwa mmadụ niile. Meghachite onwe-unu, menu onwe-unu ka umu-nna… ”. Afọ iri ka nke ahụ gasịrị, na 26 June 1991, agha Balkan tiwapụrụ, agha kpụ ọkụ n'ọnụ na nke obi ọjọọ kpọmkwem n'etiti Europe nke na-emezigharị Yugoslavia kpamkpam.
Apparition of Medjugorje: Fobọchị nke anọ
Na Satọde 27 Juun 81 a na-akpọ ndị na-eto eto ka ha gaa n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ma gbaa ajụjụ ọnụ ogologo oge nke gụnyere gụnyere nyocha ahụike na psyche, na njedebe nke a na-ekwupụta na ha nwere ahụike zuru oke. Ozugbo enwerela onwe ha, ha gbara ọsọ gaa n'ugwu ka ihe ọ bụla ghara iju ya. Nwaanyị anyị na-aza ajụjụ dị iche iche banyere ọrụ ndị ụkọ ("Ha ga-akwụsi ike n'okwukwe ma nyere gị aka, ha ga-echekwa okwukwe nke ndị mmadụ") na mkpa ikwere ọbụlagodi ahụghị ngwa ndị ahụ.
Apparition of Medjugorje: Fbọchị nke ise
Sọnde, June 28, 1981, igwe mmadụ buru ibu sitere na mpaghara niile dị nso na-amalite ịchịkọta site n'isi ụtụtụ, nke mere na n'etiti ehihie enwere ihe karịrị mmadụ 15.000 na-eche Apparition: nnabata na-enweghị atụ nke enweghị usoro na mba. Onye isi ọchịchị Kọmunist. Vergina a gọziri agọzi pụtara na obi dị ya ụtọ, ya na ndị ọhụụ ahụ kpere ekpere ma zaa ajụjụ ha.
Bọchị Sọnde bụkwa ụbọchị onye ụkọchukwu nke Medjugorje, Nna Jozo Zovko, si na njem lọta wee ju ya anya na ihe a gwara ya, na-agba ndị ọhụụ ahụ inyocha ezi okwukwe ha. Na mbu ọ nwere obi abụọ ma na-atụ ụjọ na ọ ga-abụ ugwu nke ọchịchị ndị Kọmunist imebi Nzukọ a, mana okwu ndị na-eto eto, ya mere, na-enweghị mgbagha ma na-enweghị mgbagha, jiri nwayọ merie ndozi ya ọbụlagodi na ọ kpebiri iji akọ mee ihe ugbu a na ịghara ịkwado ụmụ nwoke isii.
Apparition of Medjugorje: Thebọchị nke isii
Mọnde 29 June 1981 bụ oriri nke Ndị Nsọ Peter na Paul, nke ndị Croatian nwere mmetụta miri emi. Ndị uwe ojii na-eburu ndị ahụ hụrụ ọhụụ isii gaa ụlọ ọgwụ psychiatric, ebe ndị dọkịta iri na abụọ na-eche ka ha gaa nyocha mmụọ ọrịa ọzọ. Ndị ọchịchị nwere olile anya na a ga-ehibe ọrịa ọrịa uche ha mana dọkịta nke na-eduga ndị otu ụlọ ọgwụ a, n'etiti ihe ndị ọzọ gbasara okwukwe ndị Alakụba, kwupụtara na ọ bụghị ụmụaka ahụ na-eme ara kama ọ bụ ndị duuru ha ebe ahụ. N’ozi ọ na-agwa ndị uwe ojii nzuzo, o dere na obere Jacov na obi ike masịrị ya: ka a na-ebo ya ebubo ikwu okwu ụgha, ọ na-akwụsi ike ma na-akwụsi ike na nkwupụta ya, na-enweghị atụ egwu ọ bụla kama na-egosi ntụkwasị obi na-enweghị atụ na Madonna. , nke o jikere inye ndụ ya. "Ọ bụrụ na e nwere aghụghọ na ụmụ nwoke ndị ahụ, enweghị m ike ikpughere ya."
N'ụmụ akwụkwọ mgbede ahụ n'uhuruchi ahụ, nwatakịrị nwoke dị afọ 3, Danijel Šetka, dara ọrịa siri ike, enweghị ike ikwu okwu na ije. Ndi nne na nna, enweghi obi ike, juo arịrịọ nke Madonna ka ọ gwọọ obere nwantakịrị ahụ o kwenyere ma rịọ ya na ndị obodo niile ọkachasị ndị nne na nna ahụ na-ekpe ekpere, buo ọnụ ma bie ezigbo okwukwe. Ọnọdụ Danijel ji nwayọọ nwayọọ na-adị mma ma na njedebe nke oge ọkọchị nwatakịrị ahụ nwere ike ịga ije na ikwu okwu. Nke a bụ nke mbụ n'ime usoro ọgwụgwọ ọrụ ebube ọtụtụ narị ruo taa.
Apparition of Medjugorje: Sebọchị nke asaa
Na Tuesday 30 June ndị ntorobịa isii ahụ na-eto eto anaghị egosipụtakarị n'oge mbụ n'ụkwụ ugwu ahụ. Kedu ihe mere? N'ehihie, ụmụ agbọghọ abụọ nke gọọmentị Sarajevo zitere (na-echegbu onwe ha n'ihi na ihe omume nke Medjugorje na-echeta ma kwenye na ọ bụ usoro ịchụ nta na nke ịhụ mba n'anya nke Croats) na-enye ndị ọhụụ ahụ ohere ịnya ụgbọ ala na gburugburu. nzube nzuzo ime ka ha zilaga ha ebe a na-edebe Echiche. N'ịbụ ndị ajọ omume niile na amaghị banyere nkata ahụ, ndị na-eto eto na-ahụ ọhụụ na-anabata ohere a maka ntụrụndụ, belụsọ Ivan onye na-anọ n'ụlọ. Na 'oge a na-emebu' ha ka nọkwa nso, na-nso Podbrdo, mana ọ dị ha ka ọ dị oke mkpa, ha kwụsịrị ụgbọ ala wee pụọ. A na-ahụ ọkụ na mbara igwe ma Madonna gosipụtara ebe ahụ, igwe ojii na-aga izute ha wee kpee ekpere. Laghachi n’obodo ha wee banye n’otu ebe Nna Jozo gbara ha ozo. Girlsmụ nwanyị abụọ a na - akpọ "conspiratorial" nọkwa, na-awụ akpata oyi n'ahụ na ha hụrụ ihe ndị dị egwu dị na mbara igwe. Ha agaghị arụ ọrụ na ndị mmanye iwu.
Site n’ụbọchị ahụ, ndị uwe ojii machibidoro ịbanye ụmụ nwoke na igwe mmadụ ahụ na Podbrdo, ebe ngwa. Ma mmachibido iwu nke ụwa a anaghị akwụsị ihe ịtụnanya Chineke na nwa agbọghọ na-amaghị nwoke na-aga n'ihu ịpụta ebe dị iche iche.
Apparitions nke Medjugorje: Ebọchị nke asatọ
Julaị 1, 1981 bụ ụbọchị dị egwu: a na-akpọ ndị nne na nna na-ahụ ọhụụ n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ma na-eche ụmụ ha egwu a na-akpọ "ndị nduhie, ndị ọhụụ, ndị ọgba aghara na ndị nnupụisi". N'ehihie, mmadụ abụọ na-ahụ maka ndị na - elekọta obodo na - apụta n'otu ụgbọ ala n'ụlọ Vicka ma bulie ya, Ivanka na Marija na prevized isonyere ha na okirikiri ahụ, mana ha dina ma mgbe ha bịarutere na ụka ha na-aga n'ihu njem ahụ. Mụ nwanyị ndị ahụ na-eme mkpesa ma na-eti aka ha na windo mana na mberede, ha na-apụ n'anya ma nwee ọdịdị na-adịghị anya ebe Nwanyị nwanyị anyị gbara ha ume ka ha ghara ịtụ egwu. Ndị isi obodo abụọ ahụ ghọtara na ihe dị iche merela wee kpọghachite ụmụ agbọghọ atọ ahụ na mpaghara ịgbazi ahụ.
Jacbọchị ahụ Jacov, Mirjana na Ivan nwere egwu n'ụlọ.
Nke a bụ akụkọ dị mkpirikpi nke ngwa mbụ nke Medjugorje, nke ka na-aga n'ihu.
Nke gara aga Post Gara aga post:Medjugorje: byzọ nke Nwanyị nwanyị anyị gosipụtara iji nweta amara
Next Post → Post ozo:Arịrịọ na Nwaanyị nke Medjugorje ịrịọ taa June 25th